Lavon’ny covid-19 ny filohan’ny FLM: nalevina avy hatrany ny Rev. Rakotonirina David | NewsMada
Misaona ny eo anivon’ny FLM sy ny FFKM. Nodimandry noho ny covid-19, ny asabotsy alina teo ny filohan’ny FLM, ny Rev. Rakotonirina David. Tsy niandry ela fa nalevina avy hatrany ny nofo mangatsiakany.
«Nisy namoy ny ainy indray ka 35 izany izao ireo lavon’ny covid-19. Mitondra ny fampionona feno ary tsara ny manamarika fa mpanom­pon’Andria­manitra sady Ray am-panahy izany nodimandry izany ka mampahery ny fianakaviany sy ny kristianina manerana ny Nosy…», hoy ny mpitondra tenin’ny CCO, ny Pr Vololontiana Hanta, omaly. Notanterahina avy hatrany tetsy an-tokotanin’ny FLM Ambatovinaky, fasan’ny misionera ny fandevenana ny Rev. Rakotonirina David rehefa namoy ny ainy noho ny covid-19 ka nialana nenina teny amin’ny «Poly­clinique» Ilafy. Tonga nanome toromarika rehetra amin’ny fandevenana, ankoatra ny fotoam-pivavahana ireo ekipan’ny CCO. Teo koa ny avy amin’ny mpitandro filaminana. Voahaja avokoa ny fepetra amin’ny hamaroan’ny olona, tsy mihoatra ny 50. Nialohavan’ny fampanenoana ny lakolosin’ireo fiangonana Loteranina rehetra iza­ny tamin’ny mitataovovonana.
Mbola ao anatin’ny tsy fahasalamana ny vadiny
Tsiahivina fa namita iraka tany Morondava ny tenany ary nahatsiaro reraka. Nenti­na niakatra taty Antananarivo tamin’ny alalan’ny fiaramanidina ary nampidirina teny Ilafy avy eo. Mbola ao ana­tin’ny tsy fahasalamana koa ny vadiny na tonga nandevina aza, niaraka amin’ny za­nany efatra.
Nandalina teolojia tao amin’ ny sekoly ambony Loterana Ivory, Fianarantsoa ny Rev. Rakotonirina David. Efa pastora tao amin’ ny FLM 67 ha, Antananarivo ary talen’ny sekoly teolojikam-paritra STPL Atsimoniavoko, Vakinankaratra. Efa filohan’ ny synodam-paritany Anta­na­narivo. Manana ny «Di­plaoma master in theology» tao amin’ ny «Concordia Theological Seminary», Eta­zonia. Eo koa ny mari-pahaizana «Doctor of ministry» tao amin’ ny «Concordia Theological Seminary, Fort Wayne», Etazonia.
Fiaraha-miasa sy firaisankina…
Filoha am-perinasan’ny FFKM sy ny FFPM sady filohan’ny FLM fahadimy ny tenany izao nodimandry teo amin’ny faha-58 taonany izao. «Alao hery ny fifankatiavana sy ny fiaraha-miasa ary ny firaisakina hitondrana avo ny sata ananantsika amin’izany niverenan’ny Faha­leovantena izany», hoy izy tamin’ny hafatra sy ny niarahany farany tamin’ireo filoham-piangonana telo, tetsy amin’ny FJKM Analakely, ny alahady 21 jona, nialoha ny fetim-pirenena. Nanentana ny kristianina hanaja an’i Madagasikara ary koa ny tokony handraisana anjara hahatsara ity firenena ity.
Filoha lefitry ny FLM, i Octave Benil
Misolo toerana vonjimaika azy mandra-pahatongan’ny zaikaben’ny FLM, ny vo­lana septambra izao ny filoha lefitra, ny pasitora Octave Benil, filohan’ny Sinodam-paritany Atsinana­na, Fara­fangana.
Nisolo tena ny fanjakana tamin’ny fandevenana ny fi­lohan’ny Antenimieram­pi­renena, Razanamahasoa Chris­tine. Teo koa ny filoham-piangonana telo mirahalahy : ny Mgr Razanakolona Odon sy ny mpitandrina Andria­mahazosoa Irako Ammi ary ny filohan’ny EEM (Angli­ka­nina), ny Mgr Ranarivelo Samoela Jaona.